Global Voices teny Malagasy » Madagasikara : Tsoa-kevitra Tamin’Ilay Fiokoana Farany Teo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Jolay 2012 10:31 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Madagasikara, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Tamin'ny Alahady 22 Jolay lasa teo, roa maty, 4 naratra nandritra ny fifandonana teo amin'ny miaramila tao amin'ny toby iray ao Ivato, Madagasikara, anisan'ny namoy ny ainy tamin'izany ny kaporaly Koto Mainty, mpiambina taloha an'ny minisitry ny fiarovana, Jeneraly Noël Rakotonandrasana. Tahaka ireo fifandonana efa nisy teo aloha, miseho ny tranga toy izany ny andro mialoha ny fihaonana eo amin'ny filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomananana izay hotontosaina amin'ny Talata 24 Jolay ao Seychelles. Nilaza ny olom-pirenena malagasy fa fikasana hanakorontanana efa mahazatra ankehitriny ny tranga tahaka izany no sady manontany hoe iza no mahazo tombony amin'izany korontana izany andro vitsy mialoha ny fitadiavam-bahaolana.
Tranga efa mahazatra
Hatramin'izay nakàna ny fahefana tamin'ny taona 2009 izay, tsy vao voalohany no nisy ny fifandonana teo amin'ny miaramila alohan'ny fifanelanelanana sy ny fitadiavam-bahaolana. Nanatrika ny zava-niseho teny ifotony ny mpanao gazety iray, Rianasoa ary nampita mivantana izay zava-niseho  tao amin'ny kaonty twitter-ny, nandefa sary fanadihadiana  mikasika ny fizotry ny fiokoana kosa i Newsmada.
Nanamarika tamim-bazivazy ny bilaogy Fijery fa efa fantatra mialoha toy ny horonan-tsarimihetsika hollywoodiana ny zava-nitranga  :
Tamin'ny fanambarana ny fihaonana hotontosaina amin'ny 24 Jolay ao Seychelles , fihaonana eo amin'ny filoha Ravalomanana sy Andriamatoa Rajoelina, niloka tamin'ny namako iray aho fa tsy maintsy hisy ny zava-hitranga tsy ampoizina mba tsy hisian'ny Fihaonana na ny hanemorana izany. Azoko ny loka, nandritra ny sakafo hariva: nanjary toy ny siansa ireo zava-niainana nandritra ny telo taona farany, ary efa fantatra mialoha foana izay mety hiseho ka hany tsy misy tsirony intsony. Amin'izao hadalana izao, ahoana no handraisan'izao tontolo izao antsika ho matotra ka mahatonga antsika ho olon'ny sarimiaina sisa ? [..] Hotsaroana ny tantaran'ny fanafihana ny Viva sy ireo baomba vita-tanana mialoha ny fivoriana nomanina tany Addis-Abeba (jolay 2009) ; ny tifitra natao tamin'ny fiaran-dRajoelina talohan'ny Maputo III (desambra 2009) ; ary ny raharaha fanonganam-panjakana nampahafantarina ny vahoaka nialoha ny fivoriana any Johannesburg (avrily 2010) [..] Efa vita tsara ny “ballet”. Sehatra 1, mialoha ny fikasana fampihavanana no misy raharaha « mafana sy masiso ». Sehatra 2, ora vitsy, na minitra vitsy, eny hatramin'ny segondra vitsy monja no ahitan'ireo mpanao fanadihadiana henjana sy kalaza malagasy avy amin'ny zandary, polisy sy ny hafa karamain'ny HAT, ny meloka : ny avy ao amin-dRavalomanana. Sehatra 3, manambara ny HAT fa tsy handray anjara amin'ny fivoriana fanelanelanana nomanina »
Nanambara ny Reflexiums fa efa nalahatra tsara toy ny drafitra matipaika  ny fizotry ny fikomiana :
Ny maraimbe, nanambara fikomiana ny toby miaramila iray
Ora fohy taty aoriana, tonga tao an-toerana ny EMMO-REG (tafiky ny faritra)
Minitra vitsy avy eo, nanomboka ny tifitra vary raraka
Segondra vitsy taty aoriana, nanomboka ny fifampiraharahana
Na ireo diplaomaty ao Madagasikara aza toa niombon-kevitra ihany fa efa nomanina mialoha ny zava-nitranga. Nanamarika tao amin'ny kaonty Twitter-ny kosa ny Newsmada  fa toy izao no hita tamin'ny tatitra  avy amin'ny AFP :
Loharano diplaomatika iray no nanambara fa mety sarimihetsika hoentina hanairana ny fianakaviambe iraisampirenena na hanakorontanana ny fihaonana eo amin'ny Rajoelina sy Ravalomanana ireny. Mampiseho anefa ireny tranga ireny fa mbola ao anaty toe-draharaha mamaivay sy tsy milamina tanteraka ny Nosy
Variana mijery ity miaramila iray mikendry izay hotifirina ny olona . Sary tao amin'ny twitter @RyMakao (CC-license-BY)
Iza no mahazo tombotsoa amin'ny fitarazohan'ny krizy ?
Ny tatitra nataon'ny BBC momba ity fikomiana ity no nanamarika fa manana anjara toerana lehibe amin'ny politika malagasy ny tafika  [en]:
manana anjara toerana lehibe anaty fiaraha-monina malagasy ny tafika ary matetika no mandray anjara amin'ny politika. Izy no nanohana ny fandraisan-dRajoelina ny fahefana teo am-pelatanan'i Marc Ravalomanana tamin'ny 2009. nanampy an-dRavalomanana haka ny fahefana ihany koa ny tafika tamin'ny 2002 fony nitarika ny fihetsiketseha-panoherana ny fitondrana marksista.
Nanipika i Michael Rakotoarson fa tsy azo tsinontsinoavina ny tombontsoa ara-bolan'ireo miaramila  amin'ity fiitatry ny krizy ity:
Andao hiverenana ity tantaran'ny fikomiana ity, efa nampahatsiahivintsika hatrany amin'ny fanorenana ny asan'ny tafika ao anatin'ity fitondran'ny mpanongam-panjakana ity, sady ahazoany tombony ara-bola rahateo. Ny famaritana ny atao hoe fikomiana dia hetsi-panoherana ny mitana fahefana. Nefa raha jerena dia ny tafika ihany [izany mitana ny fahefana izany]. Noho izany ireny zava-mitranga rehetra ireny raha ny tsara indrindra (ny filaza azy) dia lamba maloto imasom-bahoaka eo amin'ny mpitsentsitra ny hatsembohan'ny hafa sy ny zava-manahirana ny zana-bahoaka.
Nanamarika kosa ny RFI tetsy andaniny fa tsy mazava mihitsy ny tanjona tiana Hahatongavana  amin'izao fikomiana izao :
Tsy namoaka fanambarana tamin'ny mpanao gazety tonga teny an-toerana ny mpioko. Filazana fohy tamin'ny radio tsy miankina an'ny mpanohitra FreeFM milaza ny fanafoanana ny rafi-panjakana rehetra sy ny fametrahana ny “directoire militaire” ihany no nataony. Fanambarana tsy misy fepetra mivaingana noraisina no tsy misy fiantraikany. Sarotra ny hilaza iny fikomiana iny ho fikasana hanongam-panjakana satria kely ny fitaovana nampiasaina. Ireo loharanom-baovao akaiky ny fisahanana ny raharaha no mandroso fa mitaky ny hialan'ny minisitry ny tafika sy ny lehiben'ny etamazaoro ny mpioko. [..] Fa ny zavamisy dia nitranga nialoha ny fihaonan'i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ity fiokoana ity, [..] natao ve ity fikomiana ity hampandamòka ny fihaonana?
Hita ihany fa tsy misy mahafantatra ny anton'ity fikomiana ity, eny fa na dia ny ao amin'ny tafika aza. Le Courier International mitatitra fa  :
Nilaza ny minisitry ny tafika, André Lucien Rakotoarimasy, fa “fikomiana nataona mpikambana vitsy” iny ary lazainy ho tsy “fantany izay tadiaviny”.
Raha manameloka ny tafika amin'ny antony mahatonga ny fifandonana ny ankamaroan'ny Malagasy, manolotra antony hafa  amin'izay nahatonga ity fiokoana ity ihany kosa i Randy.
Mampitodika any amin'ireo mety ho voantohintohina amin'ny fiveren-dRavalomanana  ny bilaogy Fijery:
Mety hiafara amin'io fiverenana io ny fihaonana nomanina ao Seychelles, tsy mahagaga noho izany raha mifampiantso hivondrona ireo manana tombontsoa amin'ny tsy hahatongavany. Na izany ireo te-hifikitra amin'ny fitondrana ; ireo tsy te-hofotorana tamin'ny zavatra nataony tamin'ny 2009 sy ny taoriany ; ireo tsy hahita ny fiafaran'ny aferany tsy mazavazava loatra (fakana vola ny orinasa lehibe, andramena…) ; ireo manararaotra ny vola azo tsy tamin'ny rariny ka manangana trano any Maorisy ; ireo milaza tena ho (mamy hoditra) nefa manao izay hamparikivy ny mpandraharaha amin'ny fitrandrahana ; izany hoe amin'ny ankapobeny, ireo mahazo tombony amin'ny fikorontanana sy ny gaboraraka amin'izao fotoana izao.
Reflexiums namehy fa tsy ilaina ny manontany ny antony nahatonga izao fifandonana izao. Tokony hanontany ny Malagasy hoe nahoana izy ireo no miaritra foana ny toe-javatra tahaka izao  :
Efa nilaza aho fa mpijery fotsiny isika, saingy diso aho, satria isika no mpamokatra ity tantara tsy alehany miverimberina tsy an-kiato ity. Avelantsika hanohy ny lalao politikany ny mpanao politika noho ny halementsika ka tsy misy tokony hitarainantsika ?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/25/35995/
 nampita mivantana izay zava-niseho: https://twitter.com/rianasoa
 sary fanadihadiana: http://www.newsmada.com/mutinerie-au-sein-du-rfi-bani-ivato-220712/
 efa fantatra mialoha toy ny horonan-tsarimihetsika hollywoodiana ny zava-nitranga: http://fijery.wordpress.com/2012/07/22/rasipiliberga-vita-gasy/
 fihaonana hotontosaina amin'ny 24 Jolay ao Seychelles: http://www.madagascar-tribune.com/Le-24-juillet-aux-Seychelles,17698.html
 toy ny drafitra matipaika: http://reflexiums.blogspot.fr/2012/07/andry-rajoelina-et-marc-ravalomanana.html
 Nanamarika tao amin'ny kaonty Twitter-ny kosa ny Newsmada: https://twitter.com/newsmada/status/227022770750513152
 tsy azo tsinontsinoavina ny tombontsoa ara-bolan'ireo miaramila: http://encampagneprofonde.tumblr.com/post/27819326469/mous-de-nez-putains-bouts-de-pets-mutins
 tsy mazava mihitsy ny tanjona tiana Hahatongavana: http://www.rfi.fr/afrique/20120723-madagascar-nombreuses-questions-objectifs-mutinerie-avortee
 mitatitra fa: http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.d03916861671bd8eddbc3df29259e051.f1.xml
 manolotra antony hafa: http://randydoit.hautetfort.com/archive/2012/07/23/encore-un-putsch-qui-a-fait-pschitt1.html